Mogadishu Journal » 2018 » December » 10
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda fedraalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta guddoomiyay shirararka toddobaadlaha ah ee Tubta Amniga iyo Caddaalada iyo Tubta siyaasada loo dhanyahay. Maamulka gobalka Banaadir, Taliska Booliiska iyo wasaaradda amniga gudaha...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjireyaasha cusub ee dalalka Turkiga iyo Suudaan ee Soomaaliya. Danjiraha dalka Turkiga Mudane Maxamed Yilmaz oo Madaxweynaha la wadaagay farriin iyo salaan uu uga siday dhiggiisa...
Mjournal :-Guddoomiye kuxigeenada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa goor dhow soo saaray go’aan u muuqda mid lagu go’doominayo awoodda Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal. Qoraal ay si wadajir ah u soo saareen ayay waxay ugu horeyn ku sheegeen maareeynta...
the first European maritime Common Security Defence Policy operation was launched on 8 December 2008, to tackle the Somali Piracy crisis, in support of UN Security Council Resolution 1816 (2008). At the time, international maritime traffic plying east-west trade routes between...
The top official of Somali’s parliament administration said on Sunday he had filed a motion with the speaker of parliament to impeach the country’s president, Mohamed Abdullahi, but the grounds for the move were unclear. “We have filed an impeachment against the president of the...
Mjournal :-Qoraal ka soo baxay Taliska Mareykanka u qaabilsan Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn uu ka fuliyay agagaarka deegaanka Basra ee duleedka Balcad uu ku dilay 4 dagaalame oo ka tirsan Shabaab. Duqeyntan ayaa la sheegay inay aheyd mid is difaac...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, ayaa dalka Jordan kula kulmay xoghayaha amniga gudaha Maraykanka, Kirstjen Nielsen. Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka iyo xoghayaha amniga gudaha Maraykanka ayaa ka wada...